Nutrition – Page 11 – Healthy Life Journal
မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စေမည့် အစာများ
၊ လရိပ်မေ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးဆက်ပွားစနစ်အတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းက အစားအသောက်တွေနဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ကြိုးစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားသမီးယူမယ့်သူတွေအနေနဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စေဖို့ စားသင့်တဲ့ အစာတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက် သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ အင်ဆူလင်ကို လျော့ကျစေတဲ့ အစွမ်းရှိတာကြောင့်...
ဂဏန်းဟင်းစားခြင်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဂဏန်းမဆလာချက်လို့ ပြောလိုက်ရင် စားချင် စိတ်ဖြစ်မယ့်သူတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အရသာရှိတဲ့ ပင်လယ်စာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကဏန်းဟင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေကော ဆိုး ကျိုးတွေပါ ရှိနေပါတယ်။ ကောင်းကျိုးများ – ဆီးချိုရောဂါအတွက် ကောင်းပါတယ်...
မေး။ ။ အခုအချိန် တမာရွက်ပြုတ်တွေပေါတော့ ကျွန်မတို့ ထမင်းနဲ့ငပိရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးချက်တွေနဲ့ တို့စား ကြပါတယ်။ တမာရွက်ပြုတ်က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးရှိပါသလဲ။ မဝင်းမေ၊ မန္တလေး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ တမာရွက်က...
ဆိတ်နို့ သောက်သင့်သလား . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နွားနို့နဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေက ဆိတ်နို့သောက်သင့်သလားဆိုတာကို သိလိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိတ်နို့မှာ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိတ်နို့က အရိုးတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ် နွားနို့လိုပဲ ဆိတ်နို့မှာလည်း ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်မှုများပါတယ်။...
အာဟာရပြည့်လိုလျှင် ကြက်ဥအနှစ် အရောင်ကို ကြည့်စားပါ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြက်ဥအနှစ်ရဲ့အရောင်က ကြည့်လှတာ တစ်ခုတည်းလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကြက်ဥအနှစ်ရဲ့အရောင်ကို ကြည့်စားဖို့ကလည်း အထူးအရေး ကြီးပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀ဝလောက်တုန်းက ကြက်ဥအနှစ်ရဲ့ အရောင်ဟာ သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ ကာရိုတီးနွိုက်ပမာဏကိုပဲ သက်ရောက်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက...
ဗိုက်ထဲ အစာမရှိချိန် စားသင့်သည့် အစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နံနက်စောစော ဗိုက်ထဲအစာမရှိချိန်မှာ စတင်စားပေးသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစာတွေ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – အုတ်ဂျုံကွေကာ (Oatmeal) နံနက်စာမှာ အမျှင်ဓာတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့ အုတ်ဂျုံကွေကာကို စားပေးတာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို သိသိသာသာ...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များနှင့် အာဟာရ (၄)
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းက တစ်ရက်ကို ဆားလက် ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းလောက်ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှုပ်ရှား မှုများတဲ့သူတွေက ချွေးထွက်တဲ့အတွက် ဆိုဒီယမ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ အလုပ်များများလုပ်တဲ့ သူတွေက ဆားပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီး နေရတဲ့သူတွေကတော့...
အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ ဘယ်လို သစ်သီးတွေ စားသင့်သလဲ . . .
လရိပ်မေ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အများအပြားကို စားတာကြောင့် အထွေထွေ ကျန်းမာ ရေးကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက အသားအရေကိုပါ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ ပန်းသီး ပန်းသီးက အသားအရေရဲ့ အကောင်းဆုံး စူပါ အစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းသီးမှာပါတဲ့ ကော်လာဂျင်ဓာတ်က အသားအရေကို နုပျိုစေပြီး ချောမွေ့စေပါတယ်။...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များနှင့် အာဟာရ (၃)
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဆိုဒီယမ်(ဆား)အကန့်အသတ် – ဆားကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့စေချင်ပါ တယ်။ ဆားများလွန်းရင် ရေငတ်လာပါလိမ့်မယ်။ – ရေငတ်လာရင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ အရည်အ တိုင်းအတာကို ထိန်းရမယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အရည်အတိုင်းအဆ များလာ...
တောင်တက်သမားတို့ သန်စွမ်းကျန်းမာနေအောင် ဘာကိုစားသင့်သလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ တောင်တက်တာကြောင့် ကယ်လိုရီများစွာ ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ တောင်တက်ရင်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ကယ်လိုရီတွေနေရာမှာ ပြန်လည်အစားထိုးဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုစားပေးရပါမယ်။ တောင်တက်တဲ့အခါ သင့်ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ဟမ်ဘာဂါမုန့်တွေနဲ့ အာလူးချောင်းကြော်တွေအပြည့်ထည့် သွားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်စွမ်းအင်ပေးနိုင်ပြီး အာဟာရတန်ဖိုးပြည့်ဝတဲ့ အစာတွေကိုသယ်ဆောင်ပြီး လမ်းခရီးမှာစားပေးရမှာပါ။ – ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်...